INetflix HDR iza kwiPrimiyamu yeSony Xperia XZ, sisiqalo nje | Iindaba zeGajethi
INetflix HDR iza kwiPrimiyamu yeSony Xperia XZ, sisiqalo nje
Ngaphambi kokuba sithethe ngeSpotify kwaye ngoku kufuneka sithethe ngayo Netflix, Iyafana kodwa kuguqulelo lomsindo, kwaye ezo zixhobo ziya zisanda kwiNetflix. Inkonzo yokusasaza kuthotho, iimuvi kunye namaxwebhu aqhubekekayo esebenza ukuziqhelanisa neetekhnoloji ezintsha kunye nezigqibo ngelixa kuncitshiswa ixesha lokulayisha kunye nokusetyenziswa kwedatha yeselfowuni, yinto iNetflix engenakubekwa tyala ngayo, ewe.
Ngoku itekhnoloji inyukayo yi-HDR, ngakumbi nangakumbi oomabonakude kunye nezixhobo zeselfowuni zibandakanya uluhlu oluguqukayo lokukhutshwa komfanekiso. Lo Sony uyazi ukuba angayenza njani kakuhle kwaye iNetflix ikwazile ukuyivuza, isenza izixhobo zePrimiyamu yeXZ ibe yeyokuqala ehambelanayo.
Ezi ndaba ziyeza kanye emva kokufika kwale teknoloji kwabhengezwa kwi-Netflix kwi-LG G6, ene-Dolby Vision, eya kuba yinto eyahlukileyo ye-HDR esele siyikhankanyile ngaphezulu kwesihlandlo esinye apha. Uluhlu lwe-XZ yeNkulumbuso lolwesibini emva koko olongeza kubuchwephesha bobuchwephesha obunikezelwayo yiNetflix kwaye eya kusivumela ukuba sonwabele umfanekiso ongcono kwiimeko ezahlukeneyo.
Kufuneka siyikhumbule loo nto ayizizo zonke ilayibrari yeNetflix exhasa umbono we-HDR / iDolby, linani elithile kuphela lothotho kunye neemovie ezixhaswayo, njengoko obu buchwephesha bungekazinzi kakuhle kubenzi kwaye ziithelevishini eziphezulu kuphela kunye nezikrini ezinolu phawu. Ukongeza, kuphela abo basebenzisi abanobhaliso lwe-4K, olona lubiza kakhulu olunikezelwa yiNetflix, abaya kuba nakho ukonwabela olu hlobo lwetekhnoloji yokubukela. Ngaphandle kwamathandabuzo, zincinci iinkampani ezincinci ziyaziqhelanisa kwaye Netflix Yeyokuqala ukwamkela olu hlobo lomxholo, ngaphandle kokuba iimbangi ezifana noMovistar + zibhengeze umxholo we-4K kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo, kodwa sisalindile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » INetflix HDR iza kwiPrimiyamu yeSony Xperia XZ, sisiqalo nje
Le yindlela iMinecraft edlalwa ngayo kwisisombululo se-16K kunye ne-16 zokujonga ngaxeshanye
I-Spotify ngokuqinisekileyo iza kwiXbox One